Izindawo ezihamba phambili zokugembula ze-Crypto 2022 | Amabhonasi, ukukhushulwa nokuningi
I-100% ibhonasi yediphozi enganamatheli efinyelela ku- $ 1k + 50 spins yamahhala
100% idiphozi ibhonasi efika ku-200 EUR
I-Daily Giveaways & Cashback, futhi uma ukwazi ukujoyina i-VIP Club yabo, ungalindela ukuthola amabhonasi anenzuzo enkulu
300 EUR + 100 AMAHHALA SPINS
100% Idiphozithi Ibhonasi efika ku-$1000
Amabhonasi akhethekile ngokujoyina i-VIP Club yawo
Isifuba Sokubambisana samahhala esifinyelela ku-80,000 Izinhlamvu zemali (~ $ 50 USD)
Ibhonasi yediphozithi engu-100% Kufika ku-5 BTC
+ I-100 Freespins
Ibhonasi engu-150 yamahhala engabizi
Thola ukubuyela emuva kokufika kuma-50% kukho konke ukubheja owubekayo
Kufika ku-15% wokubuyela emuva kuwo wonke amabhethri akho!
I-100 Free Spins
Okokubheja 5 mBTC
200% idiphozi ibhonasi efika ku-€300
I-RooWards Rakeback yokufukula yamahhala
100% ibhonasi yediphozithi efika ku-5BTC kanye nama-spins wamahhala ayi-100
Uhlelo lwe-VIP, ama-jackpots aqhubekayo & imiphetho yendlu ephansi
I-100% Ibhonasi ye-Deposit
Ibhonasi Yabadlali abasha
Kuze kube yi-5 BTC / BCH / ETH noma i-1000 USDT!
Izindaba Zokubhebhana Izindaba Zokubheja Ubuchwepheshe Bokugembula Slot Izindaba
Isho ukuthini i-RTP?
Kwangathi 16, 2022 0 105
Izindaba ze-Crypto Izindaba Zokubhebhana
Ama-VPN Angcono Kakhulu Wokugembula Kwe-Crypto Ngo-2022
Mashi 25, 2022 0 642
Izindawo ezihamba phambili zokugembula ze-Crypto I-2022
Kunezinhlobo eziningi ezahlukene zezingosi zokugembula ze-crypto laphaya. Ezinye zikuvumela ukuthi ubheje kwezemidlalo, ezinye zikuvumela ukuthi ubheje ezitokisini, ezinye zikuvumela ukuthi ubheje kwezepolitiki, njalo njalo. Kodwa okubenza bahluke iqiniso lokuthi bonke bamukela ama-cryptocurrencies njengenkokhelo. Lokhu kusho ukuthi awudingi ukuguqula imali yakho ibe yimali ye-fiat kuqala, okungathatha izinsuku noma amasonto kuye ngokuthi uhlala kuphi.
Ukuthola Amalayisense, Ukuphepha, Nobulungiswa
Amazwe amaningi anemithetho elawula ukugembula ku-inthanethi, okusho ukuthi kubalulekile ukuhlola ukuthi izwe lakini liyakuvumela yini ukugembula ku-inthanethi. Amanye amazwe awavumeli nhlobo uhlobo lokugembula, ngakho-ke ungase ufune ukukugwema lokho. Kwamanye amazwe, izinhlobo ezithile zokugembula kuphela ezivunyelwe, njenge-poker, imidlalo yasekhasino, ukubheja kwezemidlalo, njll. Kungumqondo omuhle futhi ukubheka okuhlangenwe nakho kokugembula ku-inthanethi ngelayisensi ekhishwe yiziphathimandla ezihloniphekile. Ukusebenzisa i-casino enelayisensi kubaluleke kakhulu!
Ukuvikeleka kolwazi lwakho lomuntu siqu kungenye into okufanele uyicabangele lapho ukhetha isayithi lokugembula nge-crypto. Qiniseka ukuthi isayithi lisebenzisa ubuchwepheshe bokubethela be-SSL ukuvikela idatha yakho ngenkathi wenza imisebenzi. Futhi, qiniseka ukuthi isayithi linikeza ukuqinisekiswa kwezinto eziningi, okusho ukuthi uzodingeka ukuthi ufake imininingwane yokungena eyengeziwe ngaphandle kwekheli lakho le-imeyili.
Ukukhushulwa kanye namabhonasi
Izingosi zokugembula ze-Crypto zinikeza amabhonasi ekhasino kubadlali bazo be-crypto. Lawa mabhonasi eza ngezinhlobo ezahlukene, okuhlanganisa ama-spins amahhala, amabhonasi ediphozithi, amabhonasi okudlulisela, nokunye. Kufanele njalo ufunde imigomo nemibandela yalezi zinyuso ngokucophelela ngaphambi kokubhalisa. Imvamisa, lawa mabhonasi adinga ukuthi ubheje inani elithile lezimali esizeni ngaphambi kokuthola ibhonasi. Uma uwina, ukhokhelwa ngokusekelwe enanini langempela lemali oyibekile kanye nanoma yikuphi okuwinile okuvela emizuliswaneni elandelayo yomdlalo.
Izingosi zokugembula ezingcono kakhulu ze-crypto nazo zinikeza ukukhushulwa okujwayelekile ukugcina abadlali babo be-crypto benentshisekelo. Izikhathi eziningi, lezi zenyuso zihlanganisa imicimbi ekhethekile, imiqhudelwano, iziphiwo, amabhonasi ediphozi, nokuningi. Amanye amawebhusayithi aze anikeze i-Bitcoin noma i-Ethereum njalo ngenyanga! Lokhu kuvame kakhulu phakathi kwabadlali abaqotho, abavame ukuthola amabhonasi anomusa.
Kukhona okwamanje ngaphezu kwe-1,000 cryptocurrencies etholakalayo namuhla, futhi ngayinye inezinzuzo zayo kanye nokubi. Isibonelo, i-Bitcoin inhle ngenxa yezindleko zayo eziphansi zokuthengiselana, kodwa kuthatha imizuzu eyi-10 ukuqinisekisa ukuthengiselana. I-Litecoin yinhle ngoba iyashesha, kodwa ayinayo ivolumu elingana ne-Bitcoin.
Abanye abantu bancamela ukusebenzisa ama-altcoins esikhundleni se-Bitcoin ngoba bancamela isivinini esiphansi sokuthengiselana salezi zinhlamvu zemali. Abanye bakhetha ukusebenzisa i-Bitcoins ngoba banomuzwa wokuthi iphephile kunama-altcoins. Ngakho-ke, kwehlela kokuncamelayo ngempela. Into ebalulekile okufanele uyiqaphele ukuthi i-crypto oyisebenzisela ukufaka idiphozithi nayo iyi-crypto okuzodingeka uyisebenzisele ukuhoxiswa kwe-crypto emidlalweni eminingi yasekhasino eku-inthanethi.
Abasebenzisi abasebenzisa ama-cryptocurrencies ngokuvamile bazama ukugwema izinhlobo zemali zesiko njenge-USD, EUR, GBP, ne-CAD. Babona lezi zinhlobo zemali njengezinensa kakhulu, ezibizayo, futhi ezingathembekile. Ama-Cryptocurrencies ahlukaniswa, okusho ukuthi akekho umuntu oyedwa ozilawulayo. Kunalokho, alawulwa izigidi zabasebenzisi abasebenzisa ama-node (amaseva) kumakhompyutha abo. Ngenxa yalokhu, ama-cryptocurrencies avikeleke kakhulu, futhi awakho ngaphansi kokwehla kwamandla emali.
Lezi zimfanelo zisho ukuthi zilungele amakhasino aku-inthanethi. Njengoba ama-cryptocurrencies azimele ngokuphelele kohulumeni, amabhange, neziphathimandla ezimaphakathi, aphephile ekungeneleleni kukahulumeni. Uma nje usebenzisa iwebhusayithi ethembekile nethembekile, ngeke kudingeke ukhathazeke ngokuqolwa.
Izinzuzo Zokusebenzisa I-Crypto Ukugembula
Ziningi izinzuzo zokusebenzisa i-crypto ukugembula. Enye yazo ukungaziwa. Lokhu kusho ukuthi awudingi ukudalula ubuwena komunye umuntu. Enye inzuzo ukuthi ikuvumela ukuthi ubheje noma yikuphi emhlabeni ngaphandle kokukhathazeka ngokuthi uhlala kuphi.
Enye inzuzo ukuthi ungakwazi ukugembula noma nini ufuna. Ayikho imikhawulo yokuthi ungabeka nini ukubheja kwakho. Futhi asikho isidingo sokulinda kuze kube usuku olulandelayo ukuze ubone ukuthi ukubheja kwakho kube kanjani.
Uma kuziwa kubumfihlo, ungakhetha ukuhlala ungaziwa noma cha. Uma unquma ukungena ku-akhawunti yakho ngokungaziwa, ngeke kudingeke ukhathazeke ngokuthi ikheli lakho lasesizindeni se-inthanethi liyalandelelwa.
Amasayithi amaningi okugembula e-Crypto anikezela ngemidlalo ekhetheke kakhulu, ehlanganisa ngokuqinisekile imidlalo oyikhonzile efana nezikhala, iroulette, iblackjack, i-baccarat, i-poker, amakhadi okuklwebha, nokunye - Wonke amakhasino asohlwini lwesayithi yethu, ayatholakala ngokuphelele. imidlalo fair.
Ukubheja Kwezemidlalo nge-Crypto
I-Cryptocurrency iyindlela yekusasa. Ubuchwepheshe obusha obuguqule indlela abantu abazokwazi ngayo ukushintshanisa inani esikhathini esizayo esiseduze, futhi sebukhona kakade. Izindaba ezinhle kubathengi bezemidlalo ukuthi manje sebengakwazi ukusebenzisa imali yabo ye-cryptocurrencty njengenye indlela yokukhokha lapho bebheja emicimbini yezemidlalo. Leli khasi lizochaza ukuthi kungani kufanele ucabange ukusebenzisa i-crypto ngezidingo zakho zokubheja.
Imidlalo engcono kakhulu ye-Crypto Casino
Imidlalo engcono kakhulu ye-crypto yileyo enikeza izinga eliphezulu lesasasa nokuzijabulisa. Amakhasino aku-inthanethi adume kakhulu abelokhu enikeza lezi zinhlobo zemidlalo isikhathi eside, kodwa sisekhona indawo yokukhula kule ndawo. Uma ufuna ukudlala okungcono kakhulu amakhasino we-crypto imidlalo, khona-ke kufanele uhlole uhlu lwethu olungenhla. Lokhu kuzokusiza ukuthi uthole amasayithi ahamba phambili anenombolo ephezulu yemidlalo enezinga eliphezulu etholakalayo. Siphinde sinikeze ulwazi mayelana negeyimu ngayinye ukuze wenze isinqumo esinolwazi uma kuziwa ekukhetheni isayithi lakho eliyintandokazi.
Ukukhetha Okubanzi Slot Imidlalo
Imidlalo ye-Slot iwumdlalo wekhasino othandwa kakhulu. Zinezinhlobonhlobo zezindikimba nemiklamo ehlukene, ezingatholakala kunoma iyiphi inkundla yekhasino eku-inthanethi. Imishini ye-slot ikunikeza ithuba elihle lokuwina imali enkulu ngaphandle kokuchitha isikhathi esiningi noma umzamo. Udinga nje ukucindezela inkinobho yokuspin bese ulinda inombolo yakho yenhlanhla ukuthi ivele phezulu esikrinini. Lapha yilapho uzobona khona ukuthi zingaki izinhlamvu zemali oziwine noma ezikulahlekele kulowo mzuliswano othile. Uma ufuna ukudlala umshini ongaphezu kowodwa, ungakwenza lokho ngokucindezela inkinobho ethi “Spin Again”.
Kunezinhlobo eziningana Slots etholakalayo emakethe namuhla. Ezinye zazo zihlanganisa:
I-Classic Slots - Lezi uhlobo oludala kakhulu lwezikhala. Ngokuvamile zifaka ama-reel ama-3 kanye nemigqa yokukhokha emi-5.
Izikhala Zemigqa Eminingi - Lezi zifana nezikhala zakudala, ngaphandle kokuthi zifaka imigqa eminingi esikhundleni sesihlanu.
I-Progressive Slots - Lezi zifana kakhulu nezikhala zemigqa eminingi, ngaphandle kokuthi zivumela abadlali ukuthi bawine imiklomelo ngenkathi bephotha.
Imijikelezo yebhonasi - Lena imizuliswano yebhonasi enikeza abadlali amathuba engeziwe okuwina imiklomelo emikhulu.
Izikhala Zevidiyo - Lezi izikhala ezisekelwe kuvidiyo eziza nezithombe ezipopayi nemisindo.
Ama-Jackpots aqhubekayo - Lawa ama-jackpot slots aqhubeka ekhula ngokuhamba kwesikhathi.
Ithimba Lokweseka Amakhasimende
Amakhasino amaningi e-cryptocurrency anikeza ukwesekwa kwengxoxo okungu-24/7. Ngokuvamile banethimba lesevisi yamakhasimende elizinikele elilungele ukuphendula yonke imibuzo yakho. Ngaphezu kwalokho, ezinye zezingosi zokugembula ezisezingeni eliphezulu ze-crypto nazo zinikeza ukwesekwa kwefoni ukuze ukwazi ukuwashayela ngokuqondile uma udinga usizo nganoma yini. Iningi lamaqembu esevisi yamakhasimende lisebenza ubusuku nemini ukuze ungakhathazeki ngokuthola othile uma kusebusuku.
Main Online Ukugembula Game Providers
Kunezinhlobo eziningi ezahlukene zemidlalo etholakalayo, okuhlanganisa izikhala eziku-inthanethi, imidlalo yetafula, ukubheja kwezemidlalo, i-poker, amakhadi okuklwebha, nokunye. Abanye abahlinzeki abakhulu bahlanganisa:
Abadali bezihloko ezidumile ezifana ne-Starburst ne-Gonzo's Quest, eduze nezinye izikhala ezidumile njenge-Book Of Ra, Cleopatra, ne-Mega Moolah. Bahlale benza imidlalo eyamukelwa kahle emphakathini.
Omunye wabathuthukisi be-software abaziwa kakhulu embonini yokugembula ku-inthanethi, BetSoft waziwa ngokudala eminye yemidlalo yasekhasino ejabulisa kakhulu nxazonke. Izihloko zabo zifaka ezakudala ezifana neBlackjack, Roulette, Baccarat, kanye neCraps.
Umhlinzeki oholayo wezixazululo zemidlalo, i-PlayTech inesibopho seminye yemishini ye-slot ephumelela kakhulu eyake yadalwa. Futhi bangabadali bama-jackpots aqhubekayo njenge-Mega Moolah, okungenye yemiklomelo emikhulu ye-jackpot emhlabeni.
Enye yezinkampani ezindala ebhizinisini, Microgaming usahamba ngamandla emva kwayo yonke leminyaka. Basebenza ngokukhethekile ekuhlinzekeni imidlalo yasekhasino esezingeni eliphezulu, ephathwayo neyedeskithophu.
Umdondoshiya weqiniso embonini. Ahlezi kakhulu ku-blackjack ebukhoma kanye ne-roulette, aziwa kakhulu ngemidlalo edumile efana ne-Crazy Time, i-Monopoly Live, ne-Lightning Roulette. Impela ukudala umuzwa oshintsha umdlalo ngemidlalo yabo ekhethekile.
Khetha isayithi elithembekile lokugembula le-Crypto
Ukuze ugembule ngokuphepha nangokuvikelekile, kufanele ukhethe inkundla enedumela elihle. Lokhu kusho ukukhetha enikeza amathuba afanelekile, ukuthengiselana okuvikelekile, nendawo ephephile. Ezinye izinkundla zinikeza amabhonasi abadlali abasha, ngakho-ke kufanelekile ukuhlola ukuthi yini abanganikela ngayo.
Akufanele neze ufake imali eningi kunaleyo ohlele ukuyisebenzisa nganoma yisiphi isikhathi. Uma kungenjalo, ungagcina ulahlekelwe yikho konke.
Imigomo Yokukhokha Yekhasino eku-inthanethi
Yonke i-casino ekhona inesethi yayo yemithetho, ehlanganisa nezimo zayo zokukhokha.
Ezinye izibonelo zalokhu kungaba:
Inani eliphakeme lamanani okuhoxiswa Kwamaviki onke nangenyanga
Indlela engcono kakhulu yokuthola ulwazi olwengeziwe mayelana nokuthi ikhasino ethile isebenza kanjani ukufunda imigomo nemibandela yayo. Kufanele futhi uqiniseke ukuthi wazi kahle ukuthi ungena kuphi ngaphambi kokubhalisa nekhasino eku-inthanethi.
Ungayisebenzisa kanjani isiza sokugembula se-Crypto futhi uthenge i-Crypto?
Ngokwethulwa kwe-crypto, abantu manje sebeyakwazi ukufinyelela ukubheja emidlalweni yekhasino eku-inthanethi ngaphandle kokukhathazeka ngokushintshisana ngemali. Eqinisweni, iningi lezindawo zokugembula ezingcono kakhulu ze-crypto zamukela i-Bitcoin, i-Ethereum, i-Litecoin, i-Dash, i-Dogecoin, i-Monero, i-Ripple, ne-Zcash.
Ingabe zonke izingosi Zokugembula ze-Crypto ziphephile?
Kunezinhlobo eziningi ezahlukene zezingosi zekhasino ye-crypto laphaya, ngakho-ke kubalulekile ukwazi ukuthi zinikeza ini. Abanye bazokwamukela i-Bitcoin kuphela, abanye bazothatha noma yiluphi uhlobo lwemali yedijithali, kanti abanye bazokwamukela kokubili. Kuyafaneleka futhi ukuhlola ukuthi isayithi linikeza ibhonasi noma ama-spins amahhala. Lawa mabhonasi angakunika inzuzo enkulu ngaphezu komncintiswano.
Ngiyithumela kanjani i-crypto?
Ukuthumela imali nge-cryptocurrency kulula. Odinga ukukwenza ukuthola isevisi eyamukelayo bese udlulisela izimali ekhelini elinikezwe ukushintshana. Ezinye izinsiza zizokhokhisa lokhu, ngakho bheka imigomo nemibandela ngaphambi kokubhalisa. Lapho isikhwama sakho se-crypto sesiphelile, usukulungele ukwenza idiphozithi yakho yokuqala ye-crypto - Sikufisela inhlanhla ngendlela yakho entsha yokukhokha.
Kungenzeka yini ukuhoxisa i-crypto kumasayithi okugembula ku-inthanethi?
Yebo, amakhasino amaningi aku-inthanethi azokuvumela ukuthi uhoxise imali owinile uyibuyisele endleleni yokukhokha oyisebenzisele idiphozithi yakho. Ngaphezu kwalokho, amanye amakhasino aku-inthanethi anikeza amabhonasi, okusho ukuthi akunikeza imali eyengeziwe uma ugembula endaweni yawo. Lawa mabhonasi angase eze ngendlela yama-spins amahhala, imbuyiselo yemali, noma iphesenti lebhonasi yomdlalo.
Ingabe kuyiqiniso ukuthi izingosi zokugembula ze-crypto zine-RTP embi kakhulu?
Cha, lokhu akulona iqiniso. Izingosi eziningi zokugembula nge-crypto zinezilinganiso zokukhokha ezifanayo njengezinye izinhlobo zokugembula. Ezimweni eziningi, inikeza ngisho nama-RTP angcono, ngenxa yokuthi anezindleko eziphansi zokusebenza.
Ngingawethemba Amakhasino we-Crypto?
Uma kukhulunywa ngokuthemba isiza sokugembula se-crypto, kuncike ngempela ku-opharetha. Kunabasebenzi abaningi abakhohlakele laphaya abazoqola abasebenzisi imali abayisebenzele kanzima. Kodwa-ke, kukhona nama-opharetha asemthethweni anikeza ukwesekwa kwamakhasimende okuhle kakhulu nokusiza noma nini lapho kudingeka. Kuhlale kuhle ukucwaninga isayithi ngayinye ngokucophelela ngaphambi kokufaka noma iyiphi imali. Amasayithi esiwabala kusayithi yethu ahloliwe, futhi siqinisekise ukuthi uzohlangana namakhasino kuphela ongawethemba.
Ama-Blockchains amaleja asabalalisiwe aqopha ukuthengiselana phakathi kwamaqembu. Ivumela abasebenzisi ukuthi baqinisekise okwenziwayo ngaphandle kokuthi bathembane. Lokhu kuzenza zibe usizo ezintweni ezinjengokulandelela ubunikazi bempahla, ukuqinisekisa ukuthi azisetshenziswanga kabili, nokurekhoda amavoti.
Ungakwazi yini ukudlala imidlalo yomthengisi nge-Cryptocurrencies?
Yebo, ungakwazi! Amakhasino amaningi aku-inthanethi azokuvumela ukuthi ufake i-cryptocurrensets bese ubheja imidlalo efana neroulette, blackjack, baccarat, craps, kanye ne-poker.
Kungenzeka yini ukugembula nge-Bitcoin Cash?
I-Bitcoin Cash (BCH) ingenye inguqulo ye-Bitcoin. I-Bitcoin Cash ihlukile ku-BTC ngoba ihlanganisa izici eziklanyelwe ukuthuthukisa isivinini sokuthenga nokunciphisa izindleko. Ngenxa yalokho, ifaneleka kakhulu ukusetshenziswa njengendawo yokushintshisana kunesitolo senani. Ungayisebenzisela ukugembula njengoba ubungenza kunoma yiluphi olunye uhlobo lwe-cryptocurrency.
Kungenzeka yini ukuthenga i-cryptocurrencies Ngamakhadi Esikweletu?
Yebo, ngabahlinzeki abanjalo MoonPay, kanye ne-UTORG. Zombili lezi zinkampani zihlinzeka ngokuthenga okusheshayo kwezimali ze-crypto ngamakhadi esikweletu.
Ingabe kuphephile ukusebenzisa ikhadi lami ledebithi ukuze uthenge ama-cryptocurrencies?
Kuhle kakhulu ukusebenzisa ikhadi lakho lasebhange ukuze uthenge ama-cryptocurrencies. Amakhadi okukhipha imali alawulwa yizikhungo zezezimali, okusho ukuthi zilandela imithetho eqinile mayelana nenani lemali ezingasebenzisa. Uma ufuna ukwenza isiqiniseko sokuthi ikhadi lakho alivinjwa, qiniseka ukuthi aweqi umkhawulo wakho wokusebenzisa imali wansuku zonke.
Ingabe wonke ama-cryptocurrencies ayalingana uma kukhulunywa ngokugembula?
Cha, akunjalo. Izinhlamvu zemali ezihlukene zinezakhiwo ezihlukene, ezihlanganisa ukuguquguquka, ukuqina kwezimali, nokuphepha. Ngokwesibonelo, Bitcoin ivame ukuhlotshaniswa nokuguquguquka okukhulu, kuyilapho i-Litecoin ijwayele ukuzinza. Lapho ukhetha uhlamvu lwemali ozolusebenzisela ukugembula, kubalulekile ukuthi ucabangele uhlobo olunjani lwesipiliyoni olufunayo.
Ngikuhoxisa kanjani okuwinile kwami?
Izingosi zokugembula ze-Crypto zivumela ukuhoxiswa kuqonde ngqo esikhwameni sakho se-crypto. Abanye bazodinga ubufakazi bobunikazi, abanye ngeke. Qiniseka ukuthi uhlola imigomo nemibandela ngokucophelela ngaphambi kokuhoxa.
Iyiphi indlela engcono kakhulu yokuhoxisa okuwinile kwami? Ngingakwazi ukukhipha i-fiat?
Kunezindlela ezimbili eziyinhloko zokuhoxisa ama-winnings akho: ngqo ku-fiat, noma ngokungaqondile kwenye i-crypto. Ukuhoxa ngokuqondile ku-fiat kusho ukuthi uthumela izimali zakho ekuhwebeni, okuziguqule zibe yizinhlobo zemali ze-fiat. Ukuhoxa ngokungaqondile ku-fiat kufaka phakathi ukuthumela imali owinile ekhelini lokushintshisana. Ukushintshaniswa kufaka phakathi i-Coinbase, i-Kraken, i-Bitfinex, i-Binance, ne-Gemini. Uma usukuhoxile okuwinile kwakho, kufanele ukuguqule ukubuyisele kolunye uhlobo lwemali yedijithali.
Asebenza kanjani amakhasino e-Bitcoin?
Amakhasino we-Bitcoin ayindlela ethandwa kakhulu yokudlala ku-inthanethi. Ungasebenzisa ama-Bitcoins akho ukugembula futhi uwine imali yangempela. Lawa masayithi anemidlalo eminingi, kodwa futhi anezici ezihlukile eziwenza ahluke kwezinye izingosi zokugembula. Njengoba i-Bitcoin iphakathi kwama-cryptocurrensets aziwa kakhulu, kunezindlela eziningi ongakhetha kuzo.
Yini i-Bitcoin Casino?
Ikhasino ye-bitcoin isayithi eku-inthanethi lapho ongadlala khona ngama-bitcoins esikhundleni semali ye-fiat. Umehluko omkhulu phakathi kwekhasino yendabuko kanye nekhasino ye-bitcoin ukuthi akukho gunya eliphakathi elilawula umdlalo noma uhlelo lokukhokha. Esikhundleni salokho, konke ukuthengiselana kusayithi kwenzeka peer-to-peer (P2P). Lokhu kusho ukuthi uma ufaka imali ku-akhawunti, iya ngqo kumuntu ongumnikazi wesikhwama sedijithali esiphethe izimali. Kuyasebenza okufanayo uma uhoxisa imali owinile.
Dlala i-Video Poker nge-Cryptocurrencies
Uma ukhetha ukudlala ividiyo ye-poker, udinga ukwazi ukuthi isikhathi esiningi, uzolahlekelwa. Kuyiqiniso ukuthi abanye abadlali bangase baphume nenzuzo, kodwa iningi labantu ligcina lilahlekelwe yiyo yonke stake. Kodwa-ke, uma uzimisele ukuthatha ubungozi, ungathola inzuzo encane.
Yiziphi izinhlobo ezinhle kakhulu zemidlalo ye-poker yevidiyo?
Izinhlobo ezinhle kakhulu zemidlalo ye-poker yevidiyo yilezo ezibandakanya izandla eziyingozi. Lokhu kufaka phakathi amaJack noma angcono, i-Bonus Poker, i-Double Bonus Poker, i-Deuces Wild, i-Joker Poker, kanye namaShumi noma angcono.
Ngingakwazi ukudlala ividiyo ye-poker ngaphandle kokulanda lutho?
Awudingi noma iyiphi isofthiwe ukuze udlale i-poker yevidiyo. Eqinisweni, kunamawebhusayithi amaningi lapho ungadlala khona ividiyo ye-poker ngaphandle kokuthi ulande noma yini.
Amakhasino e-Crypto vs Amakhasino Endabuko
Amakhasino endabuko abekhona kusukela ezikhathini zasendulo, futhi asengenye yezindlela ezidume kakhulu zokubheja namuhla. Banikeza amathuba amahle, ukuzijabulisa okumangalisayo, nezinhlobo eziningi zemidlalo.
Kodwa-ke, uma kukhulunywa ngokugembula kwe-crypto, izinto zihluke kakhulu. Ngokungafani nezingosi zekhasino eziku-inthanethi zendabuko, lawa masayithi awadingi ukuthi abadlali bakhokhe noma yini kusengaphambili. Esikhundleni salokho, bathembele kubuchwepheshe be-blockchain ukucubungula ukuthengiselana. Lokhu kubenza bavikeleke ngokwedlulele, kanye nokukhipha imali ngokushesha.
Izingosi zokugembula ze-Crypto zisobala ngokuphelele, okusho ukuthi konke kuqoshwa ku-blockchain. Abadlali bangabona kahle ukuthi imali yabo iya kuphi, futhi bangakwazi ukulandelela konke okwenziwayo okwenzekayo. Okufanayo akunakushiwo njalo mayelana nezingosi zokugembula zendabuko.
Lokhu kubeka izinto obala kuyinto engatholakali kumakhasino endabuko. Uma ufuna ukwenza isiqiniseko sokuthi idiphozithi yakho iya ekukhokheleni izikweletu zakho kunokufaka amaphakethe omunye umuntu, kufanele ukhethe ikhasino eku-inthanethi enegama elihle. Sinikeza izinhlobonhlobo ezinkulu zokubuyekezwa kwekhasino kusayithi lethu, futhi sithemba ukuthi uzothola ukubuyekezwa okuphelele kwekhasino ngezidingo zakho.
Siwabeka kanjani amawebhusayithi aphezulu we-Crypto Gambling
Kunezinhlobo eziningi ezahlukene zamasayithi e-crypto casino akhona, ngakho-ke kubalulekile ukwazi ukuthi ufuna ukudlala kuluphi uhlobo. Ezinye zinikeza inhlobonhlobo yemidlalo, ezinye zisebenza ngomdlalo owodwa kuphela. Ezinye zisekelwe kubuchwepheshe be-blockchain, ezinye azikho. Bonke bazocela ukuthi ufake imali ku-akhawunti yakho kuqala. Sisekela amazinga ethu ezintweni eziningi ezahlukahlukene, njengesivinini sabo sokuhoxa, ukubheja okuphezulu, ukukhetha kwegeyimu, amabhonasi, nokuningi.
Isiphetho: Yiziphi Izingosi Zokugembula Ezingcono Kakhulu ze-Crypto?
Kunezinhlobo eziningi ezahlukene zamakhasino e-crypto laphaya, ngalinye linikeza isethi yalo eyingqayizivele yezici. Udinga ukwenza isiqiniseko sokuthi uthola isiza esifanelana nezidingo zakho. Isibonelo, uma ufuna ukudlala ngemali yangempela, udinga ukubheka ikhasino elihloniphekile njengoba limbozwe kuleli khasi.
Siyethemba ukuthi lesi sihloko sikusize unqume ukuthi uyafuna yini ukuzama ukugembula nge-crypto. Kunezinketho eziningi ezinhle ezitholakalayo, ngakho-ke akufanele ube nenkinga yokuthola isayithi elihlangabezana nazo zonke izidingo zakho.
1 Izindawo ezihamba phambili zokugembula ze-Crypto ze-2022
1.1 Ukuthola Amalayisense, Ukuphepha, Nobulungiswa
1.2 Ukukhushulwa kanye namabhonasi
1.3 Ukwamukelwa kwama-cryptocurrencies
1.4 Izinzuzo Zokusebenzisa I-Crypto Ukugembula
1.5 Ukubheja Kwezemidlalo nge-Crypto
1.6 Imidlalo engcono kakhulu ye-Crypto Casino
1.7 Ukukhetha Okubanzi Slot Imidlalo
1.8 Ithimba Lokweseka Amakhasimende
1.9 Main Online Ukugembula Game Providers
1.10 Khetha isayithi elithembekile lokugembula le-Crypto
1.11 Imigomo Yokukhokha Yekhasino eku-inthanethi
1.11.1 Idiphozithi encane
1.12 Imibuzo Evame Ukubuzwa
1.12.1 Ungayisebenzisa kanjani isiza sokugembula se-Crypto futhi uthenge i-Crypto?
1.12.2 Ingabe zonke izingosi Zokugembula ze-Crypto ziphephile?
1.12.3 Ngiyithumela kanjani i-crypto?
1.12.4 Kungenzeka yini ukuhoxisa i-crypto kumasayithi okugembula ku-inthanethi?
1.12.5 Ingabe kuyiqiniso ukuthi izingosi zokugembula ze-crypto zine-RTP embi kakhulu?
1.12.6 Ngingawethemba Amakhasino we-Crypto?
1.12.7 Buyini ubuchwepheshe beBlockchain?
1.12.8 Ungakwazi yini ukudlala imidlalo yomthengisi nge-Cryptocurrencies?
1.12.9 Kungenzeka yini ukugembula nge-Bitcoin Cash?
1.12.10 Kungenzeka yini ukuthenga i-cryptocurrencies Ngamakhadi Esikweletu?
1.12.11 Ingabe kuphephile ukusebenzisa ikhadi lami ledebithi ukuze uthenge ama-cryptocurrencies?
1.12.12 Ingabe wonke ama-cryptocurrencies ayalingana uma kukhulunywa ngokugembula?
1.12.13 Ngikuhoxisa kanjani okuwinile kwami?
1.12.14 Iyiphi indlela engcono kakhulu yokuhoxisa okuwinile kwami? Ngingakwazi ukukhipha i-fiat?
1.12.15 Asebenza kanjani amakhasino e-Bitcoin?
1.12.16 Yini i-Bitcoin Casino?
1.13 Dlala i-Video Poker nge-Cryptocurrencies
1.13.1 Yiziphi izinhlobo ezinhle kakhulu zemidlalo ye-poker yevidiyo?
1.13.2 Ngingakwazi ukudlala ividiyo ye-poker ngaphandle kokulanda lutho?
1.14 Amakhasino e-Crypto vs Amakhasino Endabuko
1.15 Siwabeka kanjani amawebhusayithi aphezulu we-Crypto Gambling
1.16 Isiphetho: Yiziphi Izingosi Zokugembula Ezingcono Kakhulu ze-Crypto?
Okuhamba phambili kwe-Crypto Ukugembula
© Imininingwane 2022 Crypto-Gambling.net
Xhumana / Khangisa